FollowUpThen: Xusuusiyeyaasha Email Bilaashka ah iyo Fudud | Martech Zone
Arbacada, Maarso 25, 2015 Isniin, April 25, 2016 Douglas Karr
Waxaan jeclahay wadaagida qaar ka mid ah aaladaha wax soo saarka ee aan u adeegsado maaraynta soo gelitaanka badan ee emaylka. Sannad ka hor, waxaan kugula taliyay (oo wali isticmaalaya) Xariir kaas oo falanqeynaya saxiixyada emaylka si loo cusbooneysiiyo faahfaahinta xiriirka. Ku dhowaad laba sano ka hor, aniga la wadaago Unroll.me - nidaam weyn oo aan wali adeegsado oo ururiya kuna ururiya emayl hal emayl si loo yareeyo buuqa.
Maanta, waan wadaagayaa FollowUpThen. Waa kuwan tusaale fiican oo ah sida aan u isticmaalo. Waxaan la shaqeyneynaa rajo ama macmiil waxayna ii soo direen email waxayna ii sheegaan inay jeclaan lahaayeen inay ila xiriiraan laakiin waxay ka maqnaan doonaan magaalada ama waxay dhameystirayaan mashruuc. Waxay i weydiiyaan haddii aan taaban karo saldhigga dhowr toddobaad gudahood.
Dhib ma leh, waxaan u dirayaa emaylka 2weeks@followupthen.com. FollowUpThen ka dib jadwalka emaylka inuu igu soo noqdo 2 toddobaad ka dib. Ma jiro wax xusuusin ah oo aan ku dejinayo kalandarkayga ama ku darista hawl kale liistada hawshayda… kaliya 2 ilbidhiqsi si aan ugu gudbiyo emaylka.
FollowUpThen xitaa waxay ka dhigeysaa mid fudud adoo ka jawaabaya diiwaangelintaada bilowga ah Jawaab Dhammaan emaylka oo ku daraya emayllada ugu badan ee aad isticmaali doontid. Sidan ayay kuugu soo baxayaan dhammaystirkaaga macmiilka iimaylkaaga!
Si aad u bilawdo adeegsiga FollowUpThen, kaliya samee email oo ku dar [wakhti kasta] @ followupthen.com gudaha CC, BCC ama TO meelaha emailkaaga.
Hab kastaa wuu ka yara yara duwan yahay:
BCC Waxaad heleysaa dabagal ku saabsan emaylka, laakiin FollowUpThen email uma soo diri doonto asalka qaataha.
Ku Waxay u dirtaa iimayl mustaqbalkaaga.
CC Waxay qorsheysaa xusuusin adiga iyo qaatahaba.
Waxaad sidoo kale gali kartaa boggooda oo aad arki kartaa xusuusiyeyaashaaga sugaya! Haddii aad jeclaan lahayd isku-darka jadwalka, xusuusinta SMS, ogaanshaha jawaabta ama aad jeceshahay inaad koox dejiso, FollowUpThen waxay bixisaa qaar ka mid ah xirmooyin qiime jaban.
Tags: xusuusinta emaylkaqalabka emaylkadabagal
Maxay Tahay Sababta Naqshadeynta Webka? Waa kuwan 8 Sababood
Crisis abdinasir (@abdiwahab_abdi)
Apr 1, 2015 at 9: 48 AM
Waxaan u isticmaalaa si isku mid ah waxaanan u maleynayaa wax weyn. Jawaabta noocan oo kale ah ee dhibaatada soo noqnoqota